NOOCYADA QURAANJADA: AMARRADA, CAANAHA, NOOCYADA, NOOCYADA RUUSHKA IYO SAWIRRADA - MAQAALLO
Todoba kun oo ah ilaha ilaha hore - noocyada quraanjada
Qodhooyin ayaa laga soocaa waqtiyada dinosaurs: toddobo sagaashan oo waaweyn oo caan ah oo caan ah ayaa ku noolaa 140 milyan oo sanno ka hor, xilligii Cretaceous.
Waxay hadda ku nool yihiin dhammaan qaaradaha, marka laga reebo Antarctica, iyo sidoo kale Iceland, Greenland iyo qaar ka mid ah jasiiradaha gaar ahaan fog.
WARBIXIN: Miisaanka guud ee miyir-beelku wuxuu ka kooban yahay 10 ilaa 20% oo ka mid ah xayawaanka nool ee dhammaan xayawaanka dhulka ku nool ee gobol gaar ah, iyo kulaylaha saamiga "miisaan qaali ah" wuxuu gaaraa 25%.
Cayayaankaasi waa kuwo tiro badan ma aha oo keliya marka la eego tirada guud, laakiin sidoo kale noocyada noocyada.
Noocyada kala duwan ee quraanjada iyo sifooyinka ay degsiimadooda
Qeybaha bayoolajiga ayaa tilmaamaya dhamaan dhirta qaabka qoyska (Formicidae) iyo amarka taranka, oo sidoo kale ay ku jiraan shinni, suuf iyo bumblebees. Xaqiiqdii, Qudhaanjadu, si kaamil ah, boqoradda qaan gaarka ah, ayaa ku xidhan muddada gaaban ee dhalmada. Dabadeedna, aasaaskii ugu dambeeyay ee cusubi wuxuu dhisayaa qolka ugu horeeya ee "palace", oo qaniinaysa baalkeeda, oo ayan u baahnayn muddo dheer, mararka qaarkood, labaatan sano jir, waxay dhalaysaa qabiilo badan oo qabiil, kuwaas oo, si waafaqsan qulqulka, dhismaha, dirxiga kalkaaliyaha, cunno cun oo ilaaliya dhulka.
Niyadjab ku ah qoyska reerka waxaa jira ilaa 7,000 nooc. Cayayaanka thermofilic ee tropics gaar ahaan waa tiro badan iyo kala duwan, iyo aagga keynta-tundra waa xadka dabiiciga ah ee dejinta.
Noocyada khayaaliga ah, qallafsan, halis ah oo la yaab leh ayaa laga sameeyay dhulal ciriiri ah - meelo jannada ah:
Koonfurta Ameerika oo leh qaniinyo aad u xanuun badan, dareenka oo laga yaabo inuu si fiican u barbar dhigo boogta xabbad. Dhererka cayayaankaasi waxay gaareen saddex sintimitir.
Qudhaanjadu waa cas. Noocyo kala duwan oo reer Brazil ah, oo si khalad ah loogu soo bandhigay qaybta koonfureed ee Mareykanka, ayaa laga saaray qayb weyn oo ka mid ah dabiiciga ah, ka dibna, maraakiibta ganacsiga, waxay ku faafeen Australia iyo Shiinaha. Xanuunka ka soo qaniinyada cayayaanka ee noocyada noocan ah waxay la mid tahay dab ka gubay.
Black Bull Ants ku nool yihiin Australia iyo Tasmania. Qaniinyada ayaa soo saara sun ah xoog leh, taas oo, marka lagu daro xanuunka, badanaa waxay keenaan dareen-celin xasaasiyadeed oo ba'an.
Askarta askarta - Noocyada xawaaraha laga helo Koonfurta Ameerika iyo Afrika. Waxay ku qaataan qayb muhiim ah oo noloshooda ah oo ay ku dhex socdaan tiirarro cufan oo burburiya dhammaan waxyaabaha ku nool jidkooda, oo aan awoodin in ay si degdeg ah u baxsadaan. Ma lahan hannaan joogto ah, waxay sameeyaan magangalyo ku meel gaar ah oo loogu talagalay taranta, samaynta qoryaha guud ee jirkooda, oo xiriir la leh midba midka kale.
Qudhacyada huruuda ahKu noolaanshaha Arizona, soo qaado sunta ugu xoogga badan ee dili kara xayawaan kasta oo culeyskiisu yahay ilaa laba kiilo.
Nasiib wanaag, hareeraha dhexe ee dabiiciga ah ee dunidan caalamka ma noolaan.
Lives 220 nooc Qudhaannada Ruushka iyo wadamada CIS, kuwaas oo loo qaybiyo buuxda xaaladaha heerkulka - Woqooyiga dhulgariirka, tirada yaryar ee noocyada antska ku nool halkaas:
Gobolka Caucasus - in ka badan 160 nooc;
Ukraine - 74 nooc;
Gobolka Moscow - 40 nooc;
Gobolka Arkhangelsk - 24 nooc.
Lidka dhexe waxaa inta badan jira saddex nooc oo quraan:
Red Mira iyada oo jirka ah midab jaalle ah oo bunni ah, oo aan ka badnayn 6mm. Noocaankan wuxuu ku faafaa cayayaanka, oo ay ku jiraan cayayaanka, iyo sidoo kale ururiya suuf macaan leh - saafiga sonkorta leh.
Red Forest Ant dhexdhexaad ah oo leh caloosha madow iyo qaybta dhexe ee qaybta dhexe ee guduudan waa dagaalyaha ugu weyn ee ka soo horjeeda cayayaanka - cayayaanka kaynta. Lagu qoray liiska Laanqayrta Cas ee caalamiga ah ee noocyada halista ah.
Beertii madow wuxuu gaaraa dherer ah 1 cm, wuxuu burburiyaa cayayaanka wuxuuna ururiyaa suufka macaan ee aphids Beerta madow "boqoradda" waxay ku noolyihiin mudo dheer - 28 sano.
Marka xigta waxaad arki doontaa sawirada noocyada kala duwan ee dhirka:
Marka lagu daro noocyadan dabiiciga ah, ku dhowaad guud ahaanba la helay guri, markab ama jiil, markii ugu horeysay ee laga helay xabaalaha Masaarida iyo, iyada oo ay uga mahadcelinayso qiyaasta yar iyo isku dheelitirnaanta sare, waxay ku faaftay meelaha waaweyn. Dhererka jirka jaalaha ah ee jaalaha ah ee jaalaha ah ee leh jilicsan madow kama badna 5 mm. Aragtaan kulaylka-jecel Waxay si gaar ah u degaan guryaha iyo guryaha, si dhaqso leh ayuu u dhuftey, badeecada alaabooyinka ay u heli karto oo noqon karto gudbiye cudurada faafa. Foomamka dhowr deegaan oo hubiya ilaalinta lambarrada: Haddii hal buulood la burburiyo, isku uruurinta haraaga cayayaanka ayaa si dhakhso ah u soo celin doona "xoolaha".
MUHIIM: Fircoonkii cadowga, oo lagu garaaco hoyga qof - hubaal ah deris aan fiicnayn, oo aad uga fogaato sida ugu dhakhsaha badan.
Inta kale ee noocyada caadiga ah ee quraanjada, iyadoo leh hal dhinac, keen shaki la'aan raalli ahaanshaha. Waxqabadyadooda maalinlaha ah ee dhaqdhaqaaqa iyo ka shaqaynta walxaha kala duwan Waxay hagaajisaa qaabka ciidda iyo bacriminta. Cayayaanka badani waxyeello bay noqdaan.
Si kastaba ha ahaatee, quraanku ma aha oo kaliya ilaali aphids iyo gooryaanka - bixiyeyaasha macmacaan dhadhan fiican leh oo loogu talagalay iyaga macaan macaan - laakiin sidoo kale nadiif ah kuwaan cayayaanka, iyaga degaya on cagaaran caleemaha iyo caleemaha dhirta, oo ay ku jiraan kuwa beeraha.
Sidaa daraadeed, beeraha cawska iyo beerta xaafadaha leh ansillooyinka waaweyn waa mid aan loo baahnayn.
Ururada Biyoolojiga ah ee Bixiyaasha Gumeysiga, Kiimikooyinka sunta ah ee "hubka" iyo isku dheelitirka sarreeya ayaa ka dhigaya kuwo ku tartamaya kooxda heysta cayayaanka.
Noocyo kala duwan oo noocyada kala duwan ee dhulalka ah ayaa ka soo jeeda qulqulo-tundra ilaa dhufaysyada, burburinta cayayaanka iyo hubinta kala-wareejinta nafaqooyinka carrada.
Isla mar ahaantaana, duullaankii kumanaan bulshooyinka diineed ku soo galay dhulalka beeraha iyo gurigooda ayaa waxay ku khasban yihiin inay raadiyaan siyaabo si waxtar leh loola dagaalamo.
Kadib waxaad ku baran kartaa waxyaabo laga yaabo in ay faa'iido iyo xiiso leh kuu leeyihiin:
Sidee looga takhalusaa quraanjada cas ee guriga?
Boric acid iyo borax ka soo quraanjada
Dhaqanka dadweynaha ee quraanjada guryaha iyo guriga
Qiimeynta habka ugu habboon ee quraanjada guriga
Sidee ayay quraanjadu u qabtaan?
Waa kuwee quraanjada?
Maxay Qudhaanjadu cunaan?
Qiimaha quraan ee dabiiciga ah
Xiriirinta Qudhaanta: Boqorka Biyaha iyo qaababka qaabdhismeed ee ka shaqeynta ant
Sidee qoob-ka-dhalin karaa?
Qudhadhka beerta iyo beerta, iyo sidoo kale maqaarka
Sidee looga takhalusaa quraanjada beerta?